Sarkaal ka tirsanaa ciidamada canshuurta oo lagu dilay degmada Hodon ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Sarkaal ka tirsanaa ciidamada canshuurta oo lagu dilay degmada Hodon ee magaalada Muqdisho
Koox hubeysan oo watay gaari ayaa maanta degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ku dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada canshuurta qaada ee loo yaqaano minishiibiyada.
Sarkaalka la dilay oo lagu magacaabi jiray Maxamed C/laahi Timo-Jilic ayaa la dilay xilli uu taagnaa aggagaarka sarta Zey-biyaano ee magaalada Muqdisho, wuxuuna u geeriyooday rasaas ay kooxahaasi ku fureen.
Goob-jooge ku sugnaa goobta uu dilka ka dhacay oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in kooxahaasi hubeysan ay dhowr rasaas ku dhufteen sarkaalkaasi, kadibne uu isla-goobtaasi ku geeriyooday.
Sidoo kale, goob-joogahaasi ayaa inoo sheegay in kooxihii falkaasi dilka ah ka dambeeyay ay goobta ka baxsadeen kadib markii ay dilka fulliyeen.
Dhinac kale, ciidamo ka tirsan NISA oo markii dambe soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay ayaa howlgalo baaritaano ah halkaasi ka sameeyay, iyagoona kadib goobta ka qaaday meydka sarkaalka la dilay.
Ma ahan markii ugu horeeysay oo la dilo sarkaal ka tirsan ciidamada canshuurta, waxaana tan iyo sanadkii 2012-ka magaalada Muqdisho lagu dilay ku dhawaad 100 askari oo isugu jira ciidamada canshuurta qaada iyo saraakiishooda.